PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-21 - Neni iSA’s Got Talent
Neni iSA’s Got Talent
a angasekhaya nawo ngami ngoba wona uthi bengibuye o enguwuphekayo, omude wamaqembu ehlukene abaculi, abadansi, abahaya izinkondlo nokunye okwehlukene. Elinye lamaqembu abezimisele ngokuzodla umhlanganiso i-Advocative Fam esuka KwaMaphumulo eholwa uBongz othe bayabonga ku-e.tv ngokuletha inhlokhono kulesi sifundazwe.
“Sifike ekuseni kakhulu la singabadansi sizimisele ngokuzobonisa ikhono lethu. Kuyasijabulisa ukuthi besisondezele lo mncintiswano eduze kuyakhombisa ukuthi banika ithuba wonke umuntu onekhono,” kusho uBongz.
Abanye bebengasakwazi nokulinda njengoba bese beqalile ngaphandle benza imidanso yabo namakhono ehlukene behaya izinkondlo kubonakala ukuthi sebejahe ukuba phambi kwamajaji. Le nhlolokhono njengoba ibikulesi sifundazwe isibuya eGoli naseKapa.